Ity no fomba niarovan'i Apple ny tsiambaratelon'ny rindrambaiko amin'ity WWDC 2021 | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | 10/06/2021 18:00 | About us, WWDC 2021
Fivoahan'ny vokatra lehibe ary rindrambaiko paoma izy ireo dia iray amin'ireo teboka malemy ao amin'ny orinasa. Tsy ho an'i Apple ihany no olana fa ho an'ireo orinasa rehetra manana ny vokariny ao anaty tsiambaratelo avo lenta mba hialana amin'ny famoahana karazana rehetra. Nisy tsimbadika feno an'ny iOS 14 tafaporitsaka tamin'ny taon-dasa izay naneho endri-javatra lehibe ary naseho tamin'ny WWDC. Na izany aza, Tamin'ity taona ity tao amin'ny WWDC 2021 dia tonga niaraka tamin'ny fampahalalana kely izahay ary tena kely novolavola momba ny vaovao momba ny iOS sy iPadOS 15. Izany dia mety vokatry ny rafitra vaovao ampiasain'i Apple hamerana ny fampisehoana vaovao amin'ny alàlan'ny mombamomba ny fidirana tsirairay.
Toy izany no niarovan'i Apple ny iOS sy iPadOS 15 ho an'ny WWDC 2021
Ny zazalahy sy zazavavy an'ny 9to5mac dia nandinika ny kaody loharano an'ny beta voalohany ho an'ireo mpamorona ny iOS 15 toy ny isaky ny kinova navoakan'i Apple. Na izany aza, nahita quirk tsy mbola hitany izy ireo. Ilay Apple lehibe dia nanisy mpamaritra tokana amina endri-javatra vaovao ao amin'ny iOS sy iPadOS 15. Izany hoe ny fonosam-pitehirizana tsirairay na ny endri-javatra tsirairay dia nalefa an-tsarintany tamin'ny ID iray izay niditra tamin'ny alàlan'ny fidirana voafetra.
Afaka mampiseho ireo fiasa voafetra ireo dia ilaina manana mombamomba anao tsirairay afaka mamoha azy ireo. Izany hoe, misy lahasa sasany tsy mihidy ary aseho rehefa hitan'ny iOS fa marina ilay mombamomba azy. Amin'izany, Apple dia afaka manome fidirana amin'ny faritra sasany amin'ny iOS sy iPadOS amin'ny injeniera sasany manafina fiasa hafa tsy mila iasan'izy ireo. Izy io dia miasa mitokana amin'ny asany ary manakana ny tsirairay tsy hiditra amin'ny rafitra fiasa vaovao.
Amin'ny lafiny iray, ity dia efa mitranga manerantany miaraka amin'ny fanavaozam-baovao avy amin'ny App Store miankina amin'ny karazana iOS ananantsika ary na manapa-kevitra ny hanavao izany vaovao izany i Apple na tsia. Na izany aza, ny fetra famaritana dia tonga amin'ny rindrambaiko hijanona miaraka amin'ny tanjona hitazomana ny vaovao momba ny rafitra fiasan'izy ireo ao amin'ny tsiambaratelo malina indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ity no fomba niarovan'i Apple ny tsiambaratelon'ny rindrambaiko amin'ity WWDC 2021 ity